AABAHA JACAYLKA: Lix Sannadood Kaddib Markii Uu Furay Inantii Uu Dhalay Maradona, Sergio Aguero Oo Xidhiidh Jacayl La Bilaabay Quruxley Uu Dhalay Ciyaartoy Caan Ah – Latest Sports News
AABAHA JACAYLKA: Lix Sannadood Kaddib Markii Uu Furay Inantii Uu Dhalay Maradona, Sergio Aguero Oo Xidhiidh Jacayl La Bilaabay Quruxley Uu Dhalay Ciyaartoy Caan Ah
Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa ka baxay noloshii baagamuundada, waxaanu helay gacaliso cusub oo uu qorshaynayo inuu dhawaan guursado.
Xiddiga reer Argentine oo xilliyadii uu kubadda cagta kusoo baxay ay is barteen inan uu dhalay halyeygii ay isku waddanka ahaayeen ee Diego Maradona ayaa lix sannadood ka hor waxay is fureen Giannina Maradona, waxaana uu muddadaas ahaa kali iyo xaas la’aan.
Sida uu qoray wargeyska The Sun ee kasoo baxa waddanka Ingiriiska, Sergio Aguero ayaa bishii December ee sannadkii hore waxay is barteen inan lagu magacaabo Taylor Ward oo ay da’deedu tahay 21 jir, taas oo uu dhalay halyey caan ka ahaan jiray kubadda cagta oo wacdaro ka dhigi jiray horyaalka Premier League.
Taylor Ward oo uu dhalay halyeygii kooxaha Crewe Alexandra, Derby County iyo Burnley ee Ashley Ward oo muddo 16 sannadood ah oo uu ciyaaraha ku jiray usoo saftay 11 kooxood, ayaa waxa hadda ay xidhiidh jacayl oo meel fiican maraya la wadaagaysaa Aguero.
Gabadhan quruxleyda ah oo ah xiddigta barnaamijka Real Houswives of Cheshire, ayaa sida ay wararku sheegayaan, afhayeen u hadlay Aguero uu tilmaamay in aanay weli si buuxda ugu heshiinin inay isguursadaan.
Aguero ayaa lix sannadood ka hor waxa uu furay inan uu dhalay Diego Maradona oo lagu magacaabo Giannina, taas oo ay is qabeen muddo afar sannadood ah, ayna isku dhaleen wiil loo bixiyey Benjamin.
Giannina Maradona iyo Aguero ayaa waxa uu xidhiidhkooda guurku taabbo galay xilligii uu u ciyaarayey Atletico Madrid, waxaanay si rasmi ah isku guursadeen sannadkii 2008 ka hor intii aanay kala tegin sannadkii 2012.